About Us - Zhao Hongsheng kuputira mabhegi Co., Ltd.
Shenzhen Zhaohongsheng Handbags mugadziri rakavambwa muna 2008 sezvo mamiriro taxer. Pane fekitari Sub-bazi anonzi Shenzhen Zhaohongsheng Insulated luggle uye mabhegi kambani. zvigadzirwa yedu chafariz chikwama, Pizza hombodo, zvokudya pakukurukura hombodo, nharo huru Pizza mabhegi, banga hombodo, resitorendi bhiri chikwama, Menu Vanthan. zvigadzirwa edu zvikuru chikumbiro pazvokudya, mishonga, zvokudya, kutonhora cheni kuparadzirwa. Ndicho tanga enterpriser iri zvakagadzirwa uye kubudisa insulated zvokudya pakukurukura muhomwe. Parizvino zvinhu zvedu zvave zvose pamusoro kukona Chinese kumusika, uye aivigirwa kuna rose.
unogona kuona zvinhu zvedu kwose kwose China market.volving siyana kudare uye ekisipoti oversea munyika. Tave nokuchengeta pamwe refu pamwe tudyo zvokudya uye chando cheni kuparadzirwa stably. The "Zhaohongsheng" muchiso inthermal bhegi raiva zvikuru mumwoyo yevanhu. The risanyatsobuda uye okushumira akabvuma noruzhinji.
With kuwedzera mumusika nguva dzose, kuti fekitari chepakutanga zvakaoma zvinodiwa kubva vatengi. Fekitari yedu rakazotamisirwa muna No 35, Anxing Road, hofisi Henggang mumugwagwa Shenzhen musi May 2017.It zvakanaka-iri uye nyore mikana (nyore mamiriro ezvinhu). New nakisisa nzvimbo yavaibatisa 5000 mativi mamita dzemusangano. The kwezvivako akakwana ane Zvivako zvakanaka kusanganisira uye zvinobatsira zvakatipoteredza basa uye upenyu.
Enterpriser chinangwa: Professional, kuvimbika, Supermarket isothermal mabhegi, matarenda kudzidziswa nechigadziko
Enterpriser zano: Professional, kutenda zvakanaka, high quality, mukuru kushanda, yakanakisisa mutengo uye akavimbika
Service vavarira: Zvichienderana muzvigadzirwa utsanzi kuburikidza pamwero mukuru kwemaindasitiri kuderedza mari, ari chemhando yepamusoro pamwe zvikuru inokwanisika mutengo uye chinonyanya zvakakwana basa zvichagoverwa hwakanakisisa, vapfumi zvigadzirwa unceasingly
musika zvinangwa, pakatanga michina yemhando yepamusoro, midziyo uye vashandi, uye simbisa R & D kugona
vose kumbogadzirwa kuti mudziye zvikwama kuti vatengi anogona kufunga anogona kuwanikwa pano
chero ari isothermal mumasaga chero vatengi vanogona kufunga vachawanikwa pano
Adress: No 35, dunhu henggang mumugwagwa longgang
Foreign zvokutengeserana ndizvo kure yakanaka kutanga, zvaiti ...